जीवनशैली - महिला श्रृङगारका यी सामान खतरा !
महिला श्रृङगारका यी सामान खतरा !
खासगरी महिला वर्गलाई लक्षित गरेर बजारमा अनेक किसिमका श्रृङगार प्रशाधनहरूको बिक्री भइरहेको हुन्छ । खुला सडकमा पनि व्यापारीहरू श्रृङगारका सामान बेच्न बसिरहेका हुन्छन् । के कस्ता श्रृङगारका प्रशाधन उपभोग गर्नु उचित वा अनुचित छ भन्नेतिर यस आलेखको उद्देश्य होइन । तर त्यस्ता प्रशाधनमा केकस्ता हानीकारक तत्व रहेका हुनसक्छन् भन्ने प्रश्नमा पाठकलाई सचेत गराउनु यस पंक्तिको उद्देश्य हो । त्यसैले अनुसन्धाताका प्रमाणसिद्ध तथ्यलाई यहाँ समेटिएको छ । गुणस्तरयुक्त श्रृङगारका प्रशाधन उपयोग गर्दैमा यहाँ भनिएका घातक असर देखा परिहाल्ने चाहिँ होइन । सम्भावना त रहन्छ नै ।	थप पढ्नुहोस्
एजेन्सी । मानिस किन बूढो हुन्छ भन्ने रहस्य अझै खुल्न सकेको छैन । यसलाई परिभाषित गर्नुपर्दा यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो जुन मानिस गर्भमा रहेदेखि नै प्रारम्भ हुन्छ र उमेर वृद्धिसँगै शरीरको विभिन्न कार्य प्रणालीमा ह्रास आउन थाल्छ । उमेर बढ्दै जाँदा मानिसमा परिपक्वता, दक्षता, मौलिक स्वतन्त्रता एवं भिन्न प्रकारको व्यक्तित्व विकास हुनुका साथै शारीरिक दुर्बलता पनि थपिँदै जान्छ । मानिस किन बूढो हुन्छ भन्ने विषयमा थुप्रै खोज–अनुसन्धान गरिए पनि यसको सम्पूर्ण रहस्य अझै उजागर हुन सकेको छैन  ।	थप पढ्नुहोस्
हँसिलो मुहार भएको मानिस सबैको प्यारो, फाइदा यस्ता छन् !
एजेन्सी । भनिन्छ नि जो धेरै हास्छ उ सधै स्वस्थ्य हुन्छ अथवा हँसमुख अनुहारले अरूको मन सजिलै जित्न सक्छ । त्यसैले, हँसिलो मुहार भएको मानिस सबैको प्यारो हुन्छ । प्रायः सफल मानिसका पछाडि हाँस्नु अर्थात् खुसी रहनुले विशेष अर्थ राखेको हुन्छ । अर्थात्, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि जो मुस्कुराउन सक्छ, उसैको जीवन सफल हुन्छ । हाँस्नु स्वास्थ्यका दृष्टिले समेत एकदमै फाइदाजनक मानिन्छ । हाँसो सर्वसुलभ प्राकृतिक औषधि नै हो । अब जान्नुहोस्, हाँस्नुका फाइदा: तनाव कम हामी हाँस्दा हाम्रो शरीरमा एक किसिमको हर्मोन उत्पन्न हुन्छ । सो हर्मोनको काम तनाव कम गर्ने हो  ।	थप पढ्नुहोस्
होशियार ! तपाईं बालबालिकालाई ‘जंकफुड’ खुवाउँदै हुनुहुन्छ ?
काठमाडौं । अस्वस्थकर (जंकफुड) खानामा पर्याप्त पोषणतत्व छैन र यसले बालबालिकाको समग्र स्वास्थ्यमा खराब गर्छ भन्ने जान्दाजान्दै अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई जङ्कफुड खुवाइरहेका छन् । सस्तो र सजिलै पाइने हुनाले विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका अभिभावले आफ्ना बालबालिकालाई खाजाका रूपमा नुन र चिनीको मात्रा बढी भएको अस्वस्थ जङ्कफुड खुवाइरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा हेलन केलर इन्टरनेशनले सार्वजानिक गरेको एक अध्ययनअनुसार उपत्यकाका १२ देखि २३ महीनाका ७५ प्रतिशत बालबालिकाले अस्वस्थकर खाजा खाइरहेको पाइएको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
विश्वभरिका मानिसहरू बढी रिसाहा, तनावग्रस्त र चिन्तित : अध्ययन
एजेन्सी । विश्वभरिका मानिसहरू बढी रिसाहा, तनावग्रस्त र चिन्तित हुँदै गएको एउटा अध्ययनले देखाएको छ। संसारका १४० देशका १५०,००० भन्दा बढी मानिसहमा गरिएको अध्ययनमा उनीहरूमध्ये एक तिहाइले तनावग्रस्त भएको र पाँचमा एकजनाले दुःखी भएको वा रिसाएको बताएका छन्। वार्षिक ग्यालप ग्लोबल इमोशन्स रिपोर्टले मानिसहरूलाई सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवहरू सोध्ने गर्छ। प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा नकारात्मक देश चाड र नाइजर हुन् भने सबैभन्दा सकारात्मक देश पाराग्वे हो। अध्ययनकर्ताहरूले सहभागीको एक दिन अगाडिको अनुभवलाई समेट्ने गरेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौँ: सुखद र सफल सम्बन्धको पूर्ण समाधान छैन। तर, विज्ञान त्यसको नजिक पक्कै पुगेको छ। विवाहित दम्पत्तिको सर्वेक्षण, उनीहरूको अन्तर्क्रिया र आनीबानीको अध्ययन गरेर मनोवैज्ञानिकहरूले सफल सम्बन्धका धेरै साझा पाटाहरू पत्ता लगाएका छन्। १.सुखी दम्पत्तिले साताको एक पटक यौन सम्पर्क राख्छन् सोसाइटी फर पर्सनालिटी एण्ड सोसल साइकोलोजीले चार दशक लगाएर ३० हजार अमेरिकीको सर्वेक्षण गरेको छ। साताको एक पटक यौन सम्पर्क राख्ने दम्पत्ति सबैभन्दा खुशी हुने सर्वेक्षणको नतिजाले देखाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
बुझिराख्नुहोला यस्ता कुराले तपाइको जीवन सफल अनि खुशी हुनेछ !
काठमाडौं । जिवन सफल बनाउन तपाई हामी सबैलाई मन पर्छ । यसका लागी आफ्नो स्वयमको स्थान मा रहनुस ताकी स्वतन्त्र जीवन जिउनुको आनन्द उठाउन सकियोस । यस्ता छन्, जीवन सफल र खुशि बनाउने कुरा – आफ्नो बैक ब्यालेन्स र भौतिक सम्पत्तीलाई आफ्नो साथ मा राख्नुस , कसैको बहकाब र प्रेम मा परेर आफ्नो सम्पत्ती अरुको नाम मा नगर्नुस । – आफ्नो बच्चाहरुको यो भरोसामा निर्भर नहुनुस कि उनिहरुले तपाइलाई सेवा गर्छ । किनकी समय बदल्ना साथ उनिहरुको प्राथमिकता पनि बदलिन्छ , र कहिलेकाही त चाहेर पनि केही गर्न सकिरहेको हुदैन ।	थप पढ्नुहोस्
♣ डा. महेन्द्रबहादुर विष्ट ♣ स्वास्थ्यसम्बन्धी सानातिना समस्या तत्काल उत्पन्न भईहाले चिकित्सक कहाँ पुगिहाल्न सम्भव हुँदैन र जरुरी पनि हुँदैन । तर ती समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने ? यस्ता साधारण समस्यामा घरेलु ओखतीको निकै ठूलो महत्व हुन्छ र केही औषधीहरू यस्ता छन्, जो आफैंले चलाउन सक्ने ज्ञान राख्नु राम्रो हुन्छ । तर के हेक्का राख्नैपर्छ भने यस्ता औषधी चलाउने पूर्णज्ञान आफुसँग वा घरको कोही जान्नेबुझ्नेसँग हुनुपर्छ । साथै औषधी किन्दा त्यसको उत्पादन मिति, नष्ट हुने (म्याद सकिने) मिति र त्यसको सेवन गर्ने तरिकाबारे दिइएको निर्देशन राम्ररी जान्नुपर्छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । एक अध्ययनका अनुसार पाँच वा त्यो भन्दा बढी बच्चा जन्माउने अविभावकलाई एक वा दुई बच्चा जन्माएकालाई भन्दा बढी मुटु रोगको खतरा हुने गरेको छ । उनीहरुका अनुसार अहिले भने परिवारको आकार वा बच्चाको सङ्ख्या र महिलालाई हुने मुटु रोगको सम्भावनाका बारेमा अध्ययन गरिएको छ । यस अध्ययनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता सारा हिप्पले पाँच वा पाँच भन्दा बढी बच्चा भएका ३० प्रतिशत बाबुआमालाई विभिन्न प्रकारको मुटुसम्वन्धी रोग भएको पाइएको जानकारी दिए । तर एक वा दुई सन्तान भएका मध्ये २२ प्रतिशत बाबुआमालाई मात्रा यस्तो समस्याहरू देखिएको उनले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
‘जति थोरै सुतिन्छ, उति छिटो मरिन्छ’ : कसरी स्वस्थ जीवन पाउने !
काठमाडौं । निकै लामो समयको अनुसन्धानपछि पचास वर्षको अबको विषय 'निद्राले हामीलाई के गर्छ' भन्ने होइन कि 'निद्राले फाइदा नगर्ने केही छ कि' भन्नेमा केन्द्रित हुन थालेको छ। निद्रा र सपना स्वास्थ्य र सिर्जनशीलताका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन, यदि तपाईँ लामो र स्वस्थ्य जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने मीठो निन्द्रामा समय खर्च गर्नु भयो भने तपाईले स्वस्थ्य जिवन पाउन सक्नुहुनेछ । निन्द्राले हामीलाई के गर्छ अहिलेसम्म अध्ययनकर्ताहरूले निद्राले फाइदा नगर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी कुरा पत्ता लगाउन सकेका छैनन् ।	थप पढ्नुहोस्